China Zvakanakira zvekugadzira resin tile vagadziri uye vanotengesa | JIAXING
1. Super yemamiriro ekunze kusagadzikana Synthetic resin mataira anowanzo gadzira yakanakisa yakakwira mamiriro ekunze kusagadzikana enjini resin.SAS seASA, PPMA, pmma, nezvimwewo, izvi zvinhu zvese zvine mamiriro ekunze anodzivirira zvinhu, Iyo ine inoshamisa mamiriro ekunze kusagadzikana mune zvakasikwa nharaunda. Inogona kuchengetedza kudzikama kwemavara uye epanyama zvimiro kunyangwe mushure mekureba-kwenguva kuratidzwa kune ultraviolet mwaranzi, mwando, kupisa, kutonhora uye kukanganisa.
2. Kwakanaka ngura kuramba
Yakakwira mamiriro ekunze kusagadzikana nebwe uye huru resini ine yakanaka kwazvo ngura kuramba, Haizokanganisirwe nemvura uye chando kukonzeresa kudzikisira kwekuita, Inogona kurwisa kuora kwezvinhu zvakawanda zvemakemikari senge acid, alkali uye munyu kwenguva refu. Naizvozvo, iyo yakanyatsokodzera nzvimbo dzemahombekombe ine yakasimba salt munyu ngura uye nzvimbo dzine kwakanyanya kusvibiswa kwemhepo.
3. Yakanakisa anti-mutoro mashandiro
Chakaita zvokugadzirwa nebwe usina kukonekita vane zvakanaka mutoro nemishonga.
4. Zvakanaka kukanganisa kusagadzikana uye yakaderera tembiricha kuramba
Synthetic resin mataira ane akanaka maitiro kuramba pamhepo yakadzika tembiricha, Iyo 1 kg inorema simbi simbi inodonha zvakasununguka pane iyo tile pamusoro pakukwirira kwemamita 1.5 pasina kutsemuka. Mushure megumi -chando-nyungudika macirconi, Chigadzirwa hachina kubhowa, kubvaruka, kubvarura uye kutsemura.
Iko pamusoro peiyo synthetic resin tile yakafuta uye yakatsetseka, haisi nyore kupinza guruva, uye ine "lotus athari" .Mvura yakashambidzwa yakachena seyatsva, uye hapazove neyakaitika semota yekugezwa nemvura mushure mekuiswa kwevhu. .
6. nyore kuisa
Kazhinji, chigadzirwa ichi chine zvinotevera hunhu:
Yakakura tile tile nzvimbo, yakakwira kugadzira paving
Kurema kwechiedza, nyore kusimudza
Zadzisa zvigadzirwa zvinotsigira
Maturusi akareruka nemaitiro
Chakaita zvokugadzirwa nebwe Tile yapfuura China Environmental Kunyora Product Certification,
Kana hupenyu hwechigadzirwa hwapera, inogona kudzokororwazve nekushandiswazve.
8. Chiyero chemoto chinosvika B1
Iyo inosangana nechero yenyika kuchengetedza moto zvinodiwa zvekudenga zvinhu uye inosvika pamurazvo-unodzora mureza, zvinobudirira kunonoka kupararira kwemoto.